‘धुम ४’ मा अक्षय र सलमान ! - Aadil Times
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १७:०४ | Aadil Times
मुम्बई(बलिउड लाइफ)– आमिर खान, कटरिना कैफ र अभिषेक बच्चनको प्रमुख भूमिका रहेको फिल्म ‘धुम ३’ बक्सअफिसमा फ्लप भए पनि यो फिल्मको सिरिजप्रति फ्यानको क्रेज घटेको छैन । किनकि फ्यानहरु ‘धुम ४’ को प्रतिक्षामा छन् ।
यदि यो फिल्ममा सलमान खान र अक्षय कुमार जस्ता बलिउडका ठूला स्टार जोडिए भने फ्यानका लागि यो भन्दा ठूलो खुशी के हुन सक्ला र !
सामाजिक सञ्जालमा ‘धुम ४’ का विषयमा सलमान र अक्षयको नाम जोडेर चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले निर्माता आदित्य चोपडाले फिल्मका लागि सलमान र अक्षय फाइनल नै भइसकेको भन्ने दाबी गरेका छन् । यद्यपि यो विषयमा निर्माण कम्पनी यशराज फिल्मसले मुख खोलेको छैन ।
कामको कुरा गर्दा सलमान ‘टाइगर ३’ को तयारीमा छन् । फिल्ममा उनको अपोजिटमा कटरिना कैफ छिन् । उनी दक्षिण भारतीय फिल्म ‘खिलाडी’ र ‘मास्टर’ को रिमेकको समेत तयारीमा छन् । यी दुई फिल्मबाहेक उनी ‘किक २’ पनि बनाउँदैछन् ।
अक्षयको कुरा गर्दा उनी कटरिना कैफसँग फिल्म ‘सूर्यवंशी’ मा देखिँदैछन् । यसबाहेक ‘रक्षा बन्धन’, ‘बच्चन पाण्डे’, ‘अतरंगी रे’ र ‘बेल बटम’ उनका प्रतिक्षित फिल्म हुन् ।